Welwelka ka Soo Cusboonaaday Kacdoonka Ciidanka Qaranka EE.. - SomaliNet Forums
Welwelka ka Soo Cusboonaaday Kacdoonka Ciidanka Qaranka EE..
Postby Adan_1 » Wed Apr 01, 2009 6:40 am
Welwelka ka Soo Cusboonaaday Kacdoonka Ciidanka Qaranka EE Jiidaha Hore.
Ciidamada Qaranka Somaliland oo ka cawday mushaharkooda ayaa saacadba sacada ka danbaysa soo shaac-baxay. Warar lagu kalsoon yahay oo ka imanaya jiidaha hore, xeryaha ciidamada iyo taliyayaasha ciidanka oo caabiyi kari la’ kacdoon ciidameed ayaa soo badanaya. Waxaana jira ciidamo ku dhintay hawlgalo qaran wakhtiyadii ina dhaafay, kuwaas oo xaasaskoodii loo diiday mushaharkii saygooodii geeriyooay. Waxaa cabashooyinkaas ka mid ah, cabashada ka timi Xaali Cismaan Xasan, wuxuu ahaa saygeedii ciidankii ugu horeeyey ee laga soo qaaday gobolka Togdheer, wuxuu ahaa darajada C sanadkii 1994, markii la aasaasay ciidankii ugu horeeyey ee ahaa shanta boqol. Mushaharka xilligaas uu qaadan jiray wuxuu ahaa $200, waxaana uu geeriyooday xilligii ay dagaaladu ka qarxeen Hargeysa. Intii uu geeriyooday illaa sanadkii 2004, waxay xaasku qaadan jireen msuaharkoodii, waxaase laga jaray dhawaan, isaga oo aan la sababayn sababta agoonta looga jaray gunadii yarayd.
Waxaa la sheegayaa cabashooyinka ciidanka ayaa ah, mid aan iminka bilaabmin, laakiin soo taxnayd muddo, waxaana aad moodaa in ay ku soo beegantay xilli xasaasi ah oo uu jiro muran siyaasadeed ka dhex aloosan Somaliland.
Ciidamada Somaliland ee jiida hore ayaa dayac badan ka muuqdaan sida wararku sheegayaan, waxayna naftooda iyo qoysaskoodiiba u badan yihiin in ay helaan mushahar gaadhaya $24.00 bishiiba. Mushaharkaasi wuxuu yahay nolol maalmeedka qoyska, msuhaharka ciidamada qaranka Somaliland. Ciidamada oo aan darajo kala lahayn ayaa u badan, daraja D kuwaas oo musharkoodu noqonayo $24 dollar bishii. Su’aasha an marnaba Baarlamaanka Somaliland is waydiin waxaa weeye, marka ay miisaaniyada ansixinayaan, ma suurtogeli kartaa, in ciidanka qaranka iyo qoysaskoodu ku noolaadaan $24 Doolar.
Waa sabataas ayaa la sheegaya mida ay ugu adkaysan kari la’yihiin in ay ku suganaadaan jiida hore, sidaas awgeedna ay u samaynayaan kacdoonka iyo ammardiida badan. Dhamaan dacalada kala duwan ee buslahada ayaa ku hawlan sidii arrinkaas wax looga qaban lahaa, waxaan todobaadkan ururka ganacsatada Somaliland u qaybiyey ciidanka jiido hore raashin ay ugu talogaleen qoysaska ciidanka.
Xukuumada Somaliland oo culays badani haysto ayaa xagga siyaasada gudaha ayaa hawlgal balaadhan ka samaynaysa hawsha ciidanka, waxayna isku awlayaan sidii loo xakamayn lahaa kacdoonka ciidan ee bilaabmay, tan iyo intii la meelmariyey miisaaniyada oo aan musharkoodii wax isbedel ah lagu samayn.
Kala Soco Somaliland wixii ka soo kordha wararka kacdoonka Ciidanka Qaranka Somaliland.
Re: Welwelka ka Soo Cusboonaaday Kacdoonka Ciidanka Qaranka EE..
Postby LiQaaye_TDH » Wed Apr 01, 2009 12:55 pm
meeshi Jiidi Hore lagu Kala Yaac... every soldier will be heading home to this home town... there 10.000 soldiers in Jiidahore Sool out of those 10k atleast 6000 is HJ
Postby Somalistan » Wed Apr 01, 2009 3:41 pm
H/Jeclo must shoot that motherfocker ina riyaale. Is this what we have reduced into?
Postby The_Emperior5 » Wed Apr 01, 2009 3:44 pm
LiQaaye_TDH wrote: :lol: meeshi Jiidi Hore lagu Kala Yaac... every soldier will be heading home to this home town... there 10.000 soldiers in Jiidahore Sool out of those 10k atleast 6000 is HJ
silanyo should make a deal with nuux taani ciidanka jannanka somaliland .6 april qeyb ciidanka qarranka ha oo goosto burco we can do it like that and then silanyo burco warsaxafadeed haka qabto oo ha yidhaha. reer hargeisow rayaale idinku idinku hadhay. faisal cali waraabe na ciidangalle ha kiiciyo muse bixii na sacadmusha hargeisa ha kiciiyo. and odayaasha guurtida will say war silanyo raaca adeer soo fadhiiso walahi waan huba
waxba naga ma xumatteen
Postby Somalistan » Wed Apr 01, 2009 3:46 pm
Emperiorrrrrrrrrrrrrrr hellooo waar yaahee ma inqilaab ayaad doonaysaan?
Postby The_Emperior5 » Wed Apr 01, 2009 3:48 pm
walahi inadeer anigu isaaqan baan la yaaba xiiniya is wada haysta
lets say habaryoonis way soo qabteen
habarawal way soo qabteen
habarjeclo na ha qabtaan
arab na suldaanka guud aynu ka dhiigano
and then we should start from 1 again habaryoonis hadan wareegtadu yanay naga qaldamin
marku silanyo dhamaysto . gaboose ha qabsado. marku gaboose dhamaysto muse biixii ha qabsado siida ha inoogu socotto.
by sheekh-Farax-zero » Thu Feb 18, 2010 12:08 pm » in General - General Discussions
maxkamadda ciidanka qaranka
by SahanGalbeed » Mon Apr 01, 2013 3:40 pm » in Politics - Somaliland
Mon Apr 01, 2013 4:02 pm
by caadani90 » Sun May 20, 2018 11:47 am » in Politics - General Discussions
Sun May 20, 2018 4:42 pm
Appreciation topic for Ciidanka Qaranka
by The_Emperior5 » Sun Jan 15, 2012 10:59 am » in Politics - Somaliland
Sat Jan 28, 2012 10:43 am
Ciidanka Qaranka JSL oo Shimbiraalle soo gaadhay
by Mr_Alfaas » Mon Jul 04, 2011 12:35 pm » in Politics - Somaliland
Fanaaniinta Ciidanka Qaranka... imagine this....
by 2ndtoNone » Sat Jan 02, 2010 2:23 pm » in General - General Discussions
by Taymiyah View the latest post
Sat Jan 02, 2010 2:35 pm
Dagaalka dhex qarxay ciidanka Qaranka
by Bohol iyo karaman » Thu Jul 15, 2010 6:42 pm » in Politics - Somaliland
Fri Jul 16, 2010 3:03 pm
War degdega - Ciidanka Qaranka oo Tukaraq tagay
by Maroodijex » Sat Aug 12, 2017 8:50 am » in Politics - Somaliland
Ciidanka Qaranka Somaliland oo Xadka u dhaw
by KUN-DILE » Mon Oct 15, 2007 6:39 am » in General - General Discussions
Mon Oct 15, 2007 5:14 pm